Alterian dia mametraka ny filankevitry ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Alterian dia manangana ny filankevitry ny haino aman-jery sosialy
Alatsinainy Oktobra 19, 2009 Zoma, Oktobra 16, 2009 Douglas Karr
Ao amin'ny DMA '09 any San Diego, Alterian nanambara ny fanombohana ny Social Media Marketing Council.
Hanome torolàlana, antontan-taratasy ary torohevitra fanao tsara indrindra ho an'ny fikambanana ny SMMC momba ny karazana data azo ekena amin'ny alàlan'ny media sosialy, ary ny fomba tokony hampiasan'izy ireo azy amin'ny fomba tsara izany ho an'ny fitarihana sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Hisy vavahady an-tserasera hanomezana fidirana amin'ireo loharanom-pahalalana ireo, izay hisy ny seha-pifanakalozan-kevitra sy ny fotoana ahafahan'ny orinasa mampiseho fa mampiseho fomba fanao tsara indrindra izy ireo. Hivory voalohany ao amin'ny DMA any San Diego ny filankevitra ary aorian'izany isaky ny telo volana dia hiady hevitra momba ny fivoarana farany eto amin'ity habakabaka ity, miaraka amin'ny tanjona voalohany hamaritana ny atao hoe fampahalalana momba ny media sosialy tsy azo ekena.
Hanao zavatra lehibe amin'ny sehatry ny media sosialy ny SMMC:
Mamokatra atiny azo ampiasaina ho an'ny fikambanana, mpanjifa ary marika.
Fametrahana fomba fanao sy fitsipika faran'izay tsara momba ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo media sosialy.
Ampio ireo fikambanana ara-barotra amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny fanamby sy ny fotoana mety amin'ny fampiasana angona.
Tokony ho loharanom-pahalalana lehibe ity ary antenaiko fa hanaraka fenitra vitsivitsy azon'ny mpanjifa ampiasaina, ary manamarina ireo rindranasa an-jatony miseho isan'andro.
Ny filankevitra dia misy mpikapoka mavesatra - Vondrona DMRS, Acxiom, Merkle, TargetBase, Alterian, Engauge, Epsilon ary Harris Interactive.
Fa maninona no tsy nampihatra CMS ny orinasanao?
Karatra fandraharahana 50,000,000 XNUMX XNUMX!
Oct 19, 2009 amin'ny 4: 58 AM
Ahoana ny fomba anazaran'ny orinasam-barotra mailaka mivantana / mailaka mivantana amin'ny haino aman-jery sosialy raha toa ka tokony hijery ny filankevitry ny haino aman-jery sosialy izy ireo? Izy ireo dia "hanome torolàlana, antontan-taratasy ary torohevitra fampiasa tsara indrindra" miorina amin'ny zavatra niainana inona? Nandeha namaky ny tranonkalany aho ary tsy nisy na dia iray aza milaza ny haino aman-jery sosialy ho toy ny fanolorana tolotra, mainka izany fa ny fahaiza-manao fototra. Ampianaro aho… Tsy hitako ny fifandraisana eto.
19 Okt 2009 amin'ny 2:51 PM
Mino aho fa am-polony taona nanangonana sy nanangona tahirin-kevitra momba ny mpanjifa no hanome ny orinasam-pifandraisana sosialy fahitana iray taonina momba ny andraikitry ny angona sy ny fiainana manokana. Tsy mino aho fa manandrana manatona amin'ny tambajotra sosialy ireto olona ireto fa kosa miresaka momba ny fampiasana antonta-tahiry ao anaty media sosialy.
Ianao koa dia miresaka amin'ny tovolahy iray izay tonga avy amin'ny varotra mivantana, mailaka mivantana ary indostrian'ny media mahazatra. Azoko atao ny milaza aminao fa ny fampiharana ny lesona rehetra nianarako avy tamin'ireo indostria ireo dia nanome ahy tombony ho an'ireo namako izay nanapa-kevitra indray andro fa mpomba ny media sosialy izy ireo. Izaho dia miasa mba hitrandrahana angon-drakitra sy teknolojia 20 taona izao.
Tena miharihary amiko fa ny Facebook sy ny orinasan-tserasera hafa dia tsy manana ny clue raha resaka marketing… na dia manome fiara tonga lafatra ho azy aza izy ireo.
20 Okt 2009 amin'ny 12:22 PM
Tena manohana anao aho fa hanome torolàlana, antontan-taratasy ary torohevitra fanao tsara indrindra ho an'ny fikambanana ny SMMC. Eto aho tsy afaka misambotra izay zavatra hataon'i SMMC ho an'ny indostrian'ny media sosialy ??